काठमाडौंका यी २८ वर्षीय युवाले पत्ता लगाए विश्वले पत्ता नलगाएको कुरा, दुनिया चकित! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/काठमाडौंका यी २८ वर्षीय युवाले पत्ता लगाए विश्वले पत्ता नलगाएको कुरा, दुनिया चकित!
काठमाडौं । खगोलशास्त्री एक नेपाली अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित समूहले पुथ्वि जस्तै अर्को ग्रह पत्ता लगाएका छन् ।काठमाडौंका २८ वर्षीय युवा प्रज्वल निरौला सम्मिलित समूहले नयाँ ग्रह पत्ता लगाएका हो ।अमेरिकाको मासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्लानेटरी साइन्समा पीएचडी गर्दै गरेका काठमाडौं मैतीदेवीका निरौलाको समूहमा मुख्य भूमिका छ । सौर्यमण्डल बाहिरको ग्रहको अध्ययन गर्न निरौलासहित अमेरिका, बेल्जिय, बेलायत, स्विजरल्याण्डलगायत मुलुकका २८ जना अनुसन्धानकर्ताको टोली खटिएको थियो । उक्त ग्रहसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक आलेख एस्ट्रोनोमिकल जर्नलमा सेप्टेम्बर २१ मा प्रकाशित भएको थियो । यो ग्रहलाई अमेरिकी अन्तरिक्ष श्रेत्र नासाले समेत मान्यता दिएको छ ।निरौलाले नयाँ ग्रहको खोज र विशेषताहरुको अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ ।
खगोलशास्त्री एक नेपाली अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित समूहले पुथ्वि जस्तै अर्को ग्रह पत्ता लगाएका छन् ।काठमाडौंका २८ वर्षीय युवा प्रज्वल निरौला सम्मिलित समूहले नयाँ ग्रह पत्ता लगाएका हो ।अमेरिकाको मासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्लानेटरी साइन्समा पीएचडी गर्दै गरेका काठमाडौं मैतीदेवीका निरौलाको समूहमा मुख्य भूमिका छ । सौर्यमण्डल बाहिरको ग्रहको अध्ययन गर्न निरौलासहित अमेरिका, बेल्जिय, बेलायत, स्विजरल्याण्डलगायत मुलुकका २८ जना अनुसन्धानकर्ताको टोली खटिएको थियो । उक्त ग्रहसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक आलेख एस्ट्रोनोमिकल जर्नलमा सेप्टेम्बर २१ मा प्रकाशित भएको थियो । यो ग्रहलाई अमेरिकी अन्तरिक्ष श्रेत्र नासाले समेत मान्यता दिएको छ ।निरौलाले नयाँ ग्रहको खोज र विशेषताहरुको अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ